The Universe's Star ( 2017 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel February 11, 2017
အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ 2017 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “ The Universe’s Star ” လို့ ခေါ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ …
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို Splash Splash Love ကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ဒါရိုက်တာ Kim Ji Hyun ကိုယ်တိုင် ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး သူကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Mini Dramaလေးပါ …
Cast အနေနဲ့ကတော့ Suho ( Exo ) နဲ့ Ji Woo ( အရင်ကChannel 7မှာည၁၀နာရီလာတဲ့ရင်ခုန်သံတဒိတ်ဒိတ်ကမင်းသမီးလေး ) တို့ က အဓိကပါဝင်ထားပါတယ် …
Three Colour Fantasy Series ဖြစ်ပြီး “ The Universe’s Star ” ကတော့ ပထမပိုင်း ( White ) ပါ … နောက်ထပ် “ Green ” နဲ့ “ Gold ”ဆိုပြီး ကျန်ရှိပါသေးတယ် …
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ - တနေ့မှာအထက်တန်းကျောင်းသူကောင်မလေးတစ်ယောက် မမျှော်လင့်ဘဲရုတ်တရက်သေသွားတဲ့အခါ သူမှတ်ဥာဏ်ထဲမှာတစ်ခုပဲကျန်ခဲ့တယ် … သ အရူးအမူး ကြိုက်တဲ့အဆိုတော် ဝူဂျူး ပါ …
သေပြီးတော့ သေမင်းဖြစ်သွားတဲ့ကောင်မလေး က သူ့အဆိုတော်လေး ကို တကောက်ကောက်လိုက်ပြီး အားပေးနေဆဲပါ … အဲ့ဒီအချိန်မှာ တမလွန်က ဝူဂျူး ကိုသိပ်လိုချင်နေပါတယ် … ကောင်မလေးကလဲ ဝူဂျူး ကို သိပ်ကယ်တင်ချင်ပါတယ် … ပထမဆုံးနှင်းကျရင် ကောင်လေးသေရမှာပါ … နောက်ဆုံးကောင်မလေးက ကောင်လေး ကို ကယ်ဖို့လူပြန်ဖြစ်ခွင့်ရသွားပါတယ် …
နှင်းမကျခင် ကောင်မလေး က ကောင်လေးကိုကယ်တင်နိုင်မလား ... ?
ကောင်လေး ကရောကောင်မလေး ကို ချစ်သွားမလား … ? ဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုကြရအောင်နော် …
Translator - Eaindray
Fantasy Korea Romance
Labels: Fantasy Korea Romance
myatmin thu February 13, 2017 at 6:43 PM
၅ ပိုင်းလုံးကျိပီးပြီ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျ
tabkai abkai February 17, 2017 at 1:14 AM
tabkai abkai February 17, 2017 at 1:18 AM
Yin Win February 20, 2017 at 11:13 PM
အပိုင်း ၅ လင့် ပျက်နေလို့ ပြင်ပေးပါ
okkala net March 24, 2017 at 10:12 PM
အပိုင်း789နောက်ပိုင်းတွေ တင်ပေးပါဦး